OWERE:IGBO GA-EZUKO ỊKPA ỤBỤBỌ NCHEKWA – hoo!haa!!
OWERE:IGBO GA-EZUKO ỊKPA ỤBỤBỌ NCHEKWA
… Iji “gbaa ụzọ azụ owere mgba, ebe Gọọmenti gbahapụrụ ọrụ nchekwa ya
Owere: Ndigbo ga-enwe ọgbakọ ukwu maka Nchekwa n’Owere n’abalị iri abụọ n’abụọ nke ọnwa Ọgọọst nakwa na Houston mba Amerịka n’abalị iri atọ n’otu nke ọnwa Ọgọọst ruo n’abalị abụọ nke ọnwa Septemba afọ a.
Isiokwu ọgbakọ ukwu a bụ:Udo, Nchekwa nakwa Mmepe Ala-Igbo na ndị agbata obi ya.
Otu ndị jikọrọ aka were na-achịkọba mmemme a gụnyere Ala-Igbo Development Foundation (ADF), World Igbo Congress (WIC), South East Christian Association of Nigeria (SE-CAN) nakwa Association of South East Town Unions (ASETU).
Otu ndị ọzọ ga-esonyekwa bụ Igbo Leaders of Thought (ILT), Igbo Women Assembly (IWA),Peoples Restoration Movement (PRM), wdg.
Onyeisioche otu nhazi mmemme ahụ bụ Ọkammụta Ụkachukwu Awuzie kọwara na ihe kpatara ọgbakọ ukwu ahụ bụ maka Gọọmenti Etiti nakwa ndị ọrụ nchekwa gbaghapụrụ ọrụ dịịrị ha bụ ọrụ ichekwa ndụ nakwa akụnụba ụmụ amaala Naịjiriya.
Ọkammụta Awuzie, onye jiburu ọkwa dịka onyeisi otu jikọtara ndị nkuzi mahadum Naịjiriya bụ ASUU kọwakwara na ọgbakọ ukwu ga-atulekwa ma nyochaa ọnọdụ enweghị ezi nchekwa n’Ala-Igbo, ọ kacha ntọrị, idina nwanyị n’ike nakwa mpụ ndị ọzọ si n’aka ndị Fulani nchị ehi.
A tụkwara anya na ọgbakọ ukwu ahụ ga-elebanye anya n’okwu banyere inwe ezigbo mmekọrịta n’etiti Ndigbo na ndị agbata obi ha iji kwalite ọnọdụ nchekwa na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ nile
N’otu aka ahụ, otu Igbo Renaissance Centre(IRC) nke Mahadum Grigori, Uturu nke Ọkammụta Ihechukwu Madụbike nọ n’isi ya ga-enwekwa ọgbakọ ukwu kwa afọ ya a kpọrọ World Igbo Summit na ngwụcha ọnwa Septemba.
Igbo, agwọ nọ n’akịrịka. Ọgbakọ nile a na-akpọ gosiri na Igbo ebiliwo n’ụra. Ọ dịkwa mkpa na otu ndị Igbo dị iche iche jikọrọ aka ọnụ n’okpuru Ọhaneze iji kpebie nkwenye Ndigbo tupu Igbo n’agbụrụ Naijiria ndi ọzọ amalite ịkpa ụka ọbụla
Previous Post: ONYEISI PEACE MASS ENYEGHACHIWO ỤLỌAKỤ ỌKPỤRỤKPỤ EGO($7M) AKWỤFERE YA
Next Post: E BUGHI M AMỤMA ỌBỤLA MAKA BUHARỊ – MBAKA